Saaxiibada beesha caalamka oo soo dhoweeyay natiijada shirkii Golaha Amniga Qaranka ee ku qabsoomay Baydhabo | UNSOM
12:28 - 19 Sep
Saaxiibada beesha caalamka oo soo dhoweeyay natiijada shirkii Golaha Amniga Qaranka ee ku qabsoomay Baydhabo
Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Midowga Yurub, Urur-Goboleedka IGAD, Dowladaha Itoobiya, Talyaaniga, Norway, Sweden, Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska iyo Maraykanka ayaa soo dhoweeyay natiijooyinka qiimaha leh ee ka soo baxay shirkii Golaha Amniga Qaranka ee 3-5 Juunyo ugu qabsoomay magaalada Baydhabo, magaalo madaxda Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed.
Saaxiibada beesha caalamka ayaa madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya, Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah, gobolka Bebadir, iyo wasaaradaha shirka joogay, ku bogaadiyay heshiisyada muhiimka ah ee ay ka gaareen Qorshaha Kalaguurka, wadaagga dakhliga, iyo hanaanka doorasho ee doorashooyinka qof-iyo-cod ee 2020, waxayna ku boorriyeen in la dar-dar-geliyo hirgelinta heshiisyadaas. In loo midoobo arrimahan iyo kuwo kale oo masiiri ah waxay dhidibada uu aasaysaa horumar dheeraad ah, oo uu ka midyihiin dhamaystirka geedi-socodka dib-u-eegista Dastuurka iyo qeexidda hanaanka federaalka Soomaaliya, loona diyaar-garoobo Madasha Iskaashiga Soomaalliya oo wax-ku-ool ah, taas oo Dowladda Federaalka Soomaaliya, Midowga Yurub iyo Sweden ay wadajir ugu martigelinayaan magaalada Brussels 25 iyo 26 Juunyo.
Maadaama Soomaaliya ay gelayso weji cusub ee xiriirka ay la leedahay hay’adaha maaliyadeed ee caalamiga ah, saaxiibada Soomaaliya waxay ku dhiiri-gelinayaan madaxda Soomalaaliyeed inay sii wadaan ku-shaqaynta dareen midnimo.
 Rosemary DiCarlo oo la kulantay Madaxweyne Farmaajo kaddib safarkeedii koowaad ayada oo ah Kaaliyaha Xog-hayaha Guud ee QM
 “Ugu dambeyn, waa la i soo daayay” – 150 muhaajiriin Soomaali ah oo dalka dib ugu soo laabtay kaddib xabsi ay ku jireen Liibiya